Southside Smoosier Tech Club Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဇူလိုင်လ 7, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
iMovie ကိုကြည့်ရတာပျော်စရာကောင်းတယ် ဒီဗီဒီယို! ဤသည်မှာ Southside Smoosier Tech Club ၏ပထမဆုံးအကြိမ်အစည်းအဝေးဖြစ်သည် အဆိုပါ Bean ကိုဖလား.
မှာကလပ် join သေးငယ်အင်ဒီယားနား။ နောက်လမှာမင်းကိုတွေ့မယ်
7:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 59
Nice! လျင်မြန်စွာတည်းဖြတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ပါ။ ငါနှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်လစဉ်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ဘူး။ ငါအနာဂတ်မှာနှစ်ဆကြိုတင်ဘွတ်ကင် softball ဂိမ်းများလွန်းပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
8:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 38
စကားစမြည်ပြောဆိုတော့တကယ်အဖွင့်အစည်းအဝေးကိုတကယ်ပျော်ခဲ့တယ်။ Haliburton မှ VOIP အထိအရာရာကိုပြောဆိုခဲ့သည်။
8:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 17
Common feat အားဖြင့် 'Southside' ကိုသုံးသင့်သည်။ Kanye West ။ ဒီတစ်ခါလည်းလာမယ့်လ? 🙂
8:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 22
ဝူးဟူးငါလူသိများတယ် ဗီဒီယိုကောင်း ကောင်းတဲ့တည်းဖြတ်မှု။